Fanafihana DDoS sy fiarovana amin'ny Botnets miaraka amin'ny toro-hevitra
Araka ny baikon'ny botryters, ny botnets dia misintona solosaina marobe mba hanao asa tsy ara-dalàna. Ny hery toy izany dia ahafahan'ny mpampihorohoro an-tserasera manatanteraka heloka bevava an-tserasera. Ny ankamaroany dia tsy hita intsony ireo heloka ireo ary mety manimba ny lazan'ny fandaminana tsy misy fotoana. Ohatra, tamin'ny taona 2016, botnetana manokana no nampiasaina tamin'ny famoronana tsindry DDoS, izay niantraika tamin'ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy toy ny Twitter. Raha mahazo mailaka be dia be ianao isan'andro, dia mety ho fantatra ny adiresy imailaka amin'ny spammers. Igor Gamanenko, Semalt Mpitantana Success Manager, dia miteny fa hafaliana, manana vahaolana maromaro momba ny spam isika, ny ankamaroany dia manampy amin'ny fisorohana ny fahatongavan'ireo hafatra tsy ara-dalàna sy mampiahiahy.
Tsy azontsika atao ny tsy miraharaha ny zava-misy fa saika tsy azo atao ny manaisotra ny botnets sy ny mailaka mailaka. Ny FBI dia namotopototra ny solombavambahoaka amerikana amerikana amin'ny fijerena ny famantarana ny solosaina voan'ny aretina. Vokatr'izany, ity fanadihadiana ity dia naneho fa ny hackers dia afaka mifehy ny ordinatera isaky ny maniry. Na eo aza ny halehiben'ity olana ity, ny mpampiasa solosaina dia tsy mahafantatra na inona na inona momba ny botnets..Botnets dia tafika amin'ny ordinatera sy ny fitaovana finday izay voan'ny aretina ary manohintohina ny fanaovana heloka bevava an-tserasera, tsy misy ny fahalalan'ny mpampiasa. Ny hackers, amin'ny andaniny, dia afaka mandidy ny botnets any an-toerana ary mangataka azy ireo hangalatra fampahalalam-baovao sarotra, manely malware, mandefa mailaka mailaka, ary manomboka fanafihana DDoS.
Nandefa spam sy nizara virosy sy malware
Voalohany indrindra, tokony ho fantatrao daholo ny momba ny spam. Natao ny handefa mailaka tsisy saina sy mahasosotra. Ny sasany amin'ireo ordinatera maromaro dia asaina mandefa hafatra spam amin'ny adiresy imailaka marobe. Ny tanjon'ireny mailaka ireny dia manaparitaka viriosy sy mizara malware amin'ny aterineto. Mety ho tonga mailaka toy ny mailaka ianao satria ny vokatra atolotra azy ireo dia toa manana kalitao avo lenta ary toy izany dia sarobidy loatra, fa ny fampielezan-kevitra toy izany dia mahasoa ny hackers, ary tsy afaka mahazo tombontsoa amin'izy ireo ianao. Ohatra, raha mahazo mailaka avy amin'ny mpisera Nizeriana iray ianao milaza fa nahazo 140 tapitrisa dolara ianao, azonao atao ny mandray anjara na mifandray aminy. Ireo dia hafatra hafahafa izay manandrana mameno ny mpampiasa ary miezaka ny mangalatra ny anaran'ireo mpampiasa sy tenimiafinao.
Tadidio fa tsy tokony hamaly ireo hafatra amin'ny spam ianao. Plus, tsy tokony hikirakirana ny mailaka attachments izay tsy azonao antoka. Ny olana momba ny mailaky ny spam dia lasa zava-dehibe amin'ny fotoana, ary ny botnets dia mihetsika bebe kokoa noho izany. Ny ankamaroan'ireo botsika dia alefa amin'ny orinasa ara-barotra sy orinasa goavana ho an'ny tombony ara-bola. Botnets vao haingana no nokendren'ireo orinasa toy ny Evernote sy Feedly, ary nanandrana nanangom-bola ireo mpanakorontana tamin'ny alàlan'ny fandrahonana ireo fanafihana an-tsokosoko.
Mila fiarovana botna ve isika?
Ny solosaina iray izay voan'ny botsinina dia eo ambany fifehezan'ny hacker ary tsy azo fehezin'ny tompona tena izy. Hikirakira mangina amin'ny heloka bevava cyber ary mety hanao hetsika marobe tsy ara-dalàna. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha tratran'ny ordinateranao ny ordinateranao, dia tsy mety izy io, ka mahatonga ny Internet ho toerana tsy azo antoka sy tsy mahafinaritra ho an'ny rehetra Source .